Shil Dhaliyay Khasaare dhimasho iyo dhaawac oo Muqdisho ka dhacay.
Faah faahinno dheeraad ah ayaa ka soobaxaya Shil khasaro gaystay oo goordhaweyd ka dhacay Degmada Boondheere ee Gobolkani Banaadir, waxaana uu si gaar ah uga dhacay halka loo yaqaanno Nasiib-buundo.
Shilka ayaa waxaa uu yimid kadib markii ay isku dhaceen labo gaari oo ah nooca Soomalidu u taqaanno Caasiga iyo Mooto Bajaaj, waxaa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay Seddex kalena waa ay ku dhaawacmeen, waxaana dadkii dhaawaca ahaa la gaarsiiyay goobaha caafimaadka si xaalddoda caafimaad loogula tacaalo.
Waddada laamiga ah ee shilku ka dhacay ayaa ah waddo dhawaan dayactir lagu sameeyay, waxaana bannaanbax sameeyay dadka degaanka ee daggan xaafadaha ku teedsan waddada shilku ka dhacay.
Shacabka degmooyinka Shibis iyo Boondheere ayaa sameeyay bannaanbax ay ku dalbanayaan in waddada loo sameeyo caalamadda inta badan gaadiidku ay ku hakadaan ee loo yaqaanno Askari jiifa, taasoo ilaa hadda aan laamiga loo sameeynin.
Sidoo kale gaadiidleyda isticmaala waddada dhawaan la dayactiray ayay dadka degaanku ku eedeeyen in ay gaadiidka ku wadaan xawaare sare, iyadoo aysan waddadu lahayn Calaamadda hakiya gaadiidka ee loo yaqaano askari jiifa, waxaana taasi ay keentay in shilalku bataan.
« Shirka DFS iyo Dowlad Gobaleedyada oo Lagu Guuleystay.
Maraykanka oo Cunaqabateen saaran Soomaaliya sii kordhisay. »